USteve ethubeni kweseBafana - Isolezwe | IOL.co.za
News Business Sport Motoring Tonight Lifestyle Travel SciTech Blogs Newspapers Classifieds Property Jobs Isolezwe Home Izindaba Ezokungcebeleka Ezemidlalo Intandokazi Ezemisakazo Ezezimoto USteve ethubeni kweseBafana
June 15 2012 at 11:06am Comment on this story
UNETHUBA lokuzicabela indlela ebheke esikhundleni seBafana Bafana nokugqiba ihlazo leqembu lesizwe uSteve Komphela uma ezakhe sezibhekene neGabon emdlalwnei wobungani eMbombela Stadium, eMpumalanga, kusasa ngo-8.30 ebusuku.
INTATHELI YESOLEZWE USTEVE Komphela unethuba lokuya kunhlolokhono yakhe ngaphambi kweSafa ngoMsombuluko enokuzethemba uma engakwazi ukuhola iBafana Bafana inqobe umdlalo wayo wobungani neGabon namuhla ebusuku, eMbombela Stadium. Umdlalo uzoqala ngo-8 ebusuku kanti uzovezwa bukhoma kuSABC 3. Lo mqeqeshi obambile kulindeleke ukuthi abhekane nethimba leSafa elizompheka ngemibuzo ukuhlola ukuthi kumfanele yini ukuhola iBafana esinezinyanga ingayazi impumelelo. Izolo ithimba losomaqhinga leSafa liholwa usihlalo uFanyana Sibanyoni belihlola uNeil Tovey, Gavin Hunt, Ephraim Shakes Mashaba noGordon Igesund njengabangathatha izintambo ekuqeqesheni iqembu lesizwe kulandela ukukhonjwa indlela kukaPitso Mosimane. Laba bahlohlwe imibuzo yikomiti phakathi kwalo obekukhona uJomo Sono, Clive Barker, Farouk Khan nesikhulu esiphezulu seSafa uRobin Petersen. UKomphela uzothola elakhe ithuba lokuziveza ngoLwesibili njengoba esahlalelwe wumsebenzi wokubuyisa ukuzethemba ngokunqoba lo mdlalo weGabon. Elakuleli lagcina ukunqoba umdlalo libhekene neBurkina Faso kowobungani ngo-Agasti kanti lizithele ngehlazo lidlala ngokulingana ne-Ethiopia neBotswana emidlalweni yokuhlungela iNdebe yoMhlaba, nokwenza abonakala encipha amathuba okuthi iBafana iyoke ilubhade eBrazil ngo-2014. Izolo kuvele ukuthi iGabon itheleke kuleli nabadlali iningi labo eligijima eqenjini lika-Under 23, ngaphandle kwabadlali abane abadlale eqenjini elikhulu okuhlanganisa nokaputeni uDidier Ovono. Abanye abadlali yilabo ababambane ngo 1-1 neqembu likaMashaba lika-Under 23 nyakenye kweyokuhlungela ama-Olympics. UKomphela uthe ngeke azikhathaze ngokwenzeka kuGabon, iqembu layo elikhulu elihlule iBurkina Faso kweyokuhlungela iNdebe yoMhlaba ngesonto eledlule. “Ngicabanga ukuthi kumele sigxile kokwenzeka kithina. IGabon yiqembu elenza kahle, baqhubeka lapho begcine khona ku-African Nations Cup futhi nginesiqiniseko sokuthi beze lapha bezimisele kakhulu. Bafuna ukuzihlola ukuthi baqine kangakanani. Kufanele kube umdlalo ohehayo,” kusho uKomphela. Nayo iBafana ngeke kwathiwa iza kulo mdlalo iqinile njengoba kuleli sonto uKomphela ededele ukaputeni uSteven Pienaar noKatlego Mphela ohamba phambili ngamagoli. Kulindeleke ukuthi abadlali abafana no-Eric Mathoho, Eleazer Rodgers noTokelo Rantie baqale umdlalo. UKomphela akafunanga ukucacisa ngokuthi uzobeka bani ezintini phakathi kuka-Itumeleng Khune, Darren Keet noWayne Sandilands. “Noma ubani ozoqala usetsheliwe futhi ulindele.’’ Comment Guidelines
IOL / Isolezwe / USteve ethubeni kweseBafana We like to make your life easier